यसकारण बाइडेनको नयाँ मन्त्रिमण्डल डोनाल्ड ट्रम्पको भन्दा फरक हुनेछ « Kathmandu Pati
यसकारण बाइडेनको नयाँ मन्त्रिमण्डल डोनाल्ड ट्रम्पको भन्दा फरक हुनेछ
एजेन्सी – राष्ट्रपतिका लागि चुनिएका जो बाइडेनले आफ्नो आगमनलाई मन्त्रिपरिषद् र ह्वाइट हाउसका शीर्ष पदहरूको छनौटलाई अन्तिम रूप दिइसकेका छन् ।
बिडेनले आफ्नो राष्ट्रपति पदको अर्थ सामान्य स्थितिमा फर्कने भन्ने आश्वासन दिएका छन् । उनको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई सामान्य अवस्थामा कसरी पु¥याउने भन्ने योजनाको प्रस्तुतीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ ।
राष्ट्रपतिमा चुनिएकाले यो अन्तिम हप्तामा आफ्ना अन्तिम उम्मेदवारहरूको घोषणा गर्नेछन् । उनले दुई दर्जन विज्ञ टोली गठन गरिसकेका छन् । बाइडेनले लैंगिक समानतामा पुग्ने यो पहिलो ‘मन्त्रिपरिषद्’ हुने र बहुसंख्यक र काला र गोरा जातिका मानिस पनि सामेल हुने दाबी गरेका छन् । यसअघिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र बाराक ओबामाको मन्त्रिमण्डलमा काम गरेका अनुभवी विज्ञलाई पुनः नियुक्ती दिइएको बताइएको छ ।
केही उम्मेद्वारहरुसँग सम्बन्धित एजेन्सीहरूमा दशकौंको अनुभव छ । उनीहरुले ओबामा प्रशासनमा धेरैले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिसकेका छन् । उनीहरुले समूह र वकालत संगठनहरुसंग सम्बन्धित महत्वपूर्ण बैठक चलाइसकेका छन् ।
यो कदम राष्ट्रपति ट्रम्पको मन्त्रिपरिषद् भन्दा एकदमै फरक छ जुन वाशिंङ्टनमा थोरै अनुभव भएका गोरा पुरुषहरूले ठूलो मात्रामा प्रभुत्व जमाएका थिए । बाइडेनका सहयोगीहरूले उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को पूरा गर्ने लक्ष्यहरूमध्ये यो एक भएको बताएका छन् । उनी राष्ट्रपति हुनु भनेको सक्षम र स्थिर नेतृत्वको सरकारमा फर्किनु हो ।
डेमोक्रेट्सले यो कुरा विशेष गरी महत्वपूर्ण भनेको छ । किनकि महामारी र आर्थिक मन्दीका कारणले र अमेरिकाको क्यापिटल सिटीमा गत हप्ता भएको हिंसात्मक विद्रोहको क्रममा विश्वभरी अमेरिकाबारे नकारात्मक छाप परेको छ ।
‘जो बाइडेनले एक शताब्दीमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पद ओगटेका छछन्,’ ओबामा ह्वाइट हाउसका पूर्व वरिष्ठ सल्लाहकार डेन फेफरले भने, ‘प्रशिक्षणका लागि समय छैन । उसलाई मैदानमा हिर्काउन सक्ने व्यक्तिहरू चाहिएको छ किनकि उनको राष्ट्रपति पदको पहिलो छ महिनामा हुने घटनाले सम्भवतः सबै चार बर्षको गतिलाई निर्धारित गर्नेछ ।’
बाइडेनले आफ्नो मन्त्रिपरिषदका लागि अनुभवी दिग्गज छनौट गर्नु किन यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ ? ह्वाइट हाउसका पूर्व सल्लाहकार एरिक स्ल्ट्जका अनुसार सन् २००९ मा ओबामाले नचाहेको विषय बाइडेनले सामना गर्नुपरेको समस्या मध्ये एउटा हो कि ट्रम्प प्रशासनले संघीय एजेन्सीहरू र विभागहरूसँग कस्तो व्यवहार गरेको छ ? उनले थपे, ‘जुन सरकार संचालनमा लिन र चलाउनको लागि धेरै काम लाग्नेछ । त्यसैले नयाँ बच्चाहरूको गुच्छामा राख्नुमा कुनै मतलब छैन ।’
ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूसँग उनीहरूको मुद्दामा बढी सहमति भएका समूहहरू पनि पहिले नै बाइडेनको शासनमा खुशी हुने बताइएको छ ।
माघ १६ गतेबाट आम हड्तालमा जाने प्रचण्डको चेतावनी
काठमाण्डु – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल
सुवास नेम्वाङले संसद विघटनबारे बोलेको भिडियोले इजलासमा प्रवेश पायाे
काठमाण्डु – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले